Tsidika · Jona, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Tsidika · Jona, 2018
Tantara mikasika ny Tsidika tamin'ny Jona, 2018
Azia Atsinanana 24 Jona 2018
Tahaka ny "Chunyun" - efa akaiky ny vanim-potoana fivezivezena mialoha, mandritra sy aorian'ny Taombaovao Shinoa, nampihatra rafitra tapakila "tena anarana" ny roa tamin'ireo fitaterana an-dalamby lehibe indrindra ao Shina.
Maraoka: Ny herinandro an-tsary
Avy any an-drenivohitr'i Rabat mankany ambanivohitr'i Marrakesh mahafinaritra, mitondra antsika ny fitsidihana an'i Maraoka an-tsary i Jillian York tamin'ny alalan'ireo bilaogera.
Mino tanteraka ny fomba hanampian'ny fizahantany anatiny ny fireneny ilay bilaogera Honduras Guillermo Anderson. Mana-namana izay nanao fikirizana lehibe izy mba hananganana ny orinasany madinika ary manantena fa afaka manohana ity orinasa ity ny mponina Honduras.
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 02 Jona 2018